Sidee baan lacagta ugu diri karaa dalalka dibadda si aaminaad leh inta lagu jiro cudurka Covid-19? : Dahabshiil Customer Portal
Modified on: Thu, 10 Jun, 2021 at 5:39 PM
Adeegsiga barnaamijkeena xawaaladda internetka (www.dahabshiil.com) si aad ugu dirto lacagaha ehelka aad jeceshahay ee qurbaha jooga waa hab aaminaad leh oo muhiim ah oo loogu heli karo lacago muhiim u ah qoyska iyo saaxiibada daafaha aduunka kala jooga halka dalal badani ay ku jiraan ama qayb ka yihiin xidhitaan buuxa oo cudurka korona uu sababay.
Halkan waxaa ah liis ah dalal aad ugu diri karto adigoo isticmaalaya Dahabshiil.
Haddii sabab kasta ha noqotee xawilaadahaaga lacagta ay saameyn ku yeelatay cudurka covid-19 ama haddii aad ka walwalsan tahay sida lacagta loogu diro kuwa aad jeceshahay ee dibedda jooga si nabad ah, nala socodsii oo waxaan sameyn doonnaa waxaan awoodno inaan ku caawinno.
Haddii aad u baahan tahay inaad nala hadasho, waxaan hadda haysannaa taageero 24/7 ah, fadlan nagalasoo xariir qeybta chatka, ama naga soo wac (08081960755) ama noogu soo dir (support@dahabshiil.com)